Motorola Razr ayaa dib u dhigeysa daahfurka sababo la xiriira baahidiisa sare | Androidsis
Motorola Razr wuxuu dib u dhigayaa suuqgeyntiisa
In yar uun bil ka hor, Motorola Razr oo la laaban karo ayaa la soo bandhigay, taleefanka saddexaad ee isku laaban kaas oo la soo bandhigay sanadkan iyo astaantii ugu horeysay. Soo bandhigiddeeda, astaanta ayaa xaqiijisay in qaabkani waxaa laga bilaabi lahaa bisha Diseembar dalka Mareykanka. Waxaa la filayay in la iibiyo 26-ka Diseembar, laakiin daah-furkeeda ayaa dib u dhacday.
In kasta oo ay tahay sabab macquul ah, tan iyo markii loo dalbaday Motorola Razr ayaa ka weyn shirkadda lafteeda ay filaysay. Sidaa darteed, si loola qabsado tan, bilaabitaanku wuxuu dib u dhacay illaa Janaayo, marka laga hadlayo Mareykanka. Waxay awoodi doonaan inay la qabsadaan dalabkan sidan.
Shirkaddu waxay rabtaa inay awood u yeelato inay ka jawaabto baahida weyn ee loo helay Motorola Razr. Taasi waa sababta taleefankan waxaa la bilaabayaa bisha janaayo 2020 Mareykanka. Waxay noqon doontaa dib u dhac yar oo dhowr toddobaad ah, inkasta oo daahfurka caalamiga ah waa inaanay saamayn ku yeelan, ayay shirkaddu tidhi.
In kasta oo tani ay tahay war wanaagsan, oo ugu yaraan tilmaamaysa in dan laga leeyahay taleefankan sumadda leh, qaar baa bilaabay faafiyaan warar xan ah oo ku saabsan dhibaatooyinka iman kara telefoonka. Waa in la xusuusnaado in Galaxy Fold iyo Huawei Mate X labadaba ay dib u dhaceen dhibaatooyin kala duwan awgood.
Shirkaddu waxay rabtay inay ka baxdo, iyada oo taas xaqiijinaysa wax dhibaato ah kuma laha Motorola Razr. Waa wax fudud in dalabku ka sarreeyo sidii la filayay oo dib u dhigista daahfurka ay siin doonto farqi weyn oo ay uga jawaabaan si ku habboon. Waxay qaadan doontaa oo keliya dhowr toddobaad inta ay bilaabeyso.
Motorola Razr waa inuu yimaadaa Spain sidoo kale Janaayo 2020, iyadoo qiimo lagu muujiyay waxyar kadib soo bandhigideedii. Mareykanka dhexdiisa xiisaha ay soo saarto mar hore ayuu ku cadaaday, sidaa darteed waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko haddii ay sidoo kale kicinayso xiisaha suuqa ee suuqyada sida Spain.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola Razr wuxuu dib u dhigayaa suuqgeyntiisa